Cadowga islaamka iyo colaadaha uu hurinayo (Qeybta 1aad). W/Q Sh. Axmed Cabdisamad | RBC Radio
Cadowga islaamka iyo colaadaha uu hurinayo (Qeybta 1aad). W/Q Sh. Axmed Cabdisamad
Posted on May 19, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Cadowga islaamka iyo colaadaha uu hurinayo (Qeybta 1aad).
Qormadaan oo taxane noqon doonta, in shaa’ Allaah waxaan kaga hadlaynaa ciidamada kala duwan ee ibliis u shaqeeya kuwa ay yihiin, qaybohooda, shaqooyinkooda, qaar ka mid ah tabaha ay isticmaalaan iyo siyaabihii looga hortagi lahaa.
Qur’aanku wuxuu inoo sheegay inay jiraan ciidamo ibliis. Wuxuu kale oo sheegay in nabi kasta lahaa cadow mujrimiin ah. Wuxuu kale oo inoo sheegay in nabi kasta uu lahaa cadow isugu jira shaydaano jinni ah iyo shaydaano insi ah.
Wuxuu kale oo inoo sheegay in shaydaanku inoo yahay cadow ay colaaddiisu iska caddahay. Wuxuu kale oo sheegay in gaaladu inoo yihiin col ay cadaawadiisu caddahay. Wuxuu kale oo sheegay in munaafiqiintu ay yihiin cadowga dhabta ah, wuxuuna yiri: ka digtoonow.
Haddaba ciidamada ibliis ee Qur’aanku sheegay waa seddexda qolo ee aynu kor ku soo xusnay ee kala ah: shaydaan, gaal iyo munaafiq, waxayna ku midaysan yihiin (Jinni iyo insiba) tilmaamaha shaydaanimada iyo gaalnimada oo isugu jirta mid muuqata iyo mid qarsoon.
Waxaa kale oo Qur’aanku sheegay inay muslimiinta ku dhex jiraan dad iimaankoodu daciif yahay oo munaafiqiinta u dhag-raariciya, kuna saamooba xumaanta iyo fasaadka ay wadaan, isla markaasna u gudbiya xogta muslimiinta.
Dadka diinta la dirira kuma koobna qaybahaan colaaddooda caddaystay ee aynu ka hadalnay iyo kuwa daciifka ah ee la duufsaday ee waxaa jira dadyow diinta la dirira laakiin aan heerkaas gaarsiisnayn oo aan iyagana ka hadli doono, in shaa’ Allaah.
Aayadaha aynu soo sheegnay waxay ina tusayaan in ay jiraan cadow dhab ah oo isugu jira shaydaano jinni ah iyo shaydaano insi ah oo har iyo habeenba ku hawlan baadiyeynta iyo dambi galinta dadka. Waxaa intaa dheer dad muslimiin ah oo iimaan yari ama wacyi yari la ildaran oo cadowga islaamku duufsanayaan, kuna adeeganayaan iyagoon is ogayn.